XAGUU KU DAMBEEYEY DAMACII | SMC
Home WARARKA MAANTA XAGUU KU DAMBEEYEY DAMACII
XAGUU KU DAMBEEYEY DAMACII
Waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey Dr Abey Ahmed magaalada Muqdisho labao sano ka hor xiligaas oo ahayd 16jun 2018 isla mar ahaantaas booqashadaas waxaa ku larnaa damac dhinacyo badan Kadib saacado ay ku jireen kulan albaabada u xiran, ayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed shaaciyeen waxyaabaha ay ku heshiiyeen. Iyaga oo shir jaraa’id ka hadlaya ayay si wadajir ah u sheegeen in labada dal uu dhex marayo iskaashi dhinacyo badan, kaas oo uu xitaa qeyb ka yahay is dhexgal labada bulsho.
Waxa ay madaxda si wada jir ah ugu dhawaaqeen guddi heer wasiir ah oo si dhaqso ah u hawlgalaya oo isku dhaf ah, kaas oo ka shaqayn doona fulinta waxyaabihii lagu heshiiyay.
Heshiiskaas oo aan lala wadaagin Barlamaanka Soomaaliya waxaa isweydiin mudan siyaasdda maldahan oo uu kula macaamilaayo Md Farmaajo dalka Itoobiya ma tahay mid dani ugu jirta dalka Soomaaliya? waxaase isweydiin mudan in Madaxweynaha Soomaaliya Md Farmaajo intuusan qaban hogaanka uu ahaa Murashaxa aawey falsafadii uu ka aaminsanaa Itoobiya ney tahay cadowga Soomaaliya oo ku sheegey Barlamaanka hortiisa?
Shacbiga Soomaliyeed waxaa qalbiyadooda ka guuxaya taariikh madoow oo ma hadho ah oo dhexmartey goor hore labada waddan weliba ay goconayaan dhacddadii foosha xumeyd ee ay ka geysteen Ciidamada Itoobiya Degaanada KGS (south west of Somalia) sida soo qabashadii Muktar Robow 13 Desember 2018 iyo soo ridistii diyaaradii gargaarka u sidey shacbiga Degmada Berdaale 4 May 2020 waan ogahay in Itoobiyada cusub in ay jiraan xukuno isbedbedeley ku yimid kacdoono shacbi.
Siyaasadu malaha saaxiib joogto ah ee waxayse leedahahy dano joogto ah waxaan ognahay in manta ay maamuleysoDekada muqdisho shirkad laga leeyahay Tukiga oo ah saaxiibka dhabta ah Soomaaliya waxaa jiri doono maqaal aanu uga hadli doono isbarbardhiga saameynta siyaasadeed ee Turkiga iyo Itoobiya hadaba xaguu ku dambeeyey damacii Abey Ahmed!! akhriste la soco qeybta labaad ee qormadeena .
WQ Okash Sugow
Previous articleHa furin Albaabka foowdada
Next articleTaliska Ciidanka Xoogga oo ka warbixayay howlgal lagu dilay Sarkaal Al-Shabaab ah